Phambi konogumbe, nwabela i-documentary kaLeonardo DiCaprio yasimahla | Iindaba zeGajethi
Xa amagcisa ehla esebenza, oku kuyenzeka, imisebenzi yokwenyani yobugcisa iyavela. Kule meko, uMartin Scorsese noFisher Stevens babone kufanelekile ukukhokela Umbhalo malunga notshintsho lwemozulu olungathethi nto ngaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi kokuphumelela kweOscar kwiAkhademi, uLeonardo DiCaprio. Ngale ndlela, kungcono ukuba singayithengisa. Kodwa ukujoyina umbutho akungomnye ngaphandle kukaBarak Obama, uBill Clinton kunye noBan-Ki-Moon, uNobhala Jikelele weZizwe eziManyeneyo. Ungaphoswa lolu xwebhu lukhawulezayo malunga notshintsho lwemozulu National Geographic ikubonile kufanelekile ukupapasha simahla (kuphela kule veki) kubo bonke abantu abanomdla.
Malunga neyure enesiqingatha yamaxwebhu ebesebe laseSpain lenkampani NatGeo ikubonile kufanelekile ukuhambisa iSpanish, ukuze ababukeli abanamanqanaba asezantsi esiNgesi basonwabele ngokulinganayo, kuba umsebenzi omkhulu wezi mpawu ukufanele oko nangaphezulu. Inyani yile yokuba uxwebhu lufumene uhlolo oluninzi oluninzi, lokuvuna 7,4 kwi Ifilimu, Kunye no-8.8 wabasebenzisi be Imetacritic. Umdala uLeonardo uyazi kakuhle ukuba angalatha phi iidolo, kwaye umngcikiva ngenxa yezi zinto zilandelayo kungekho ngaphantsi kukaMongameli Obama:
I-United States yaseMelika ibe yeyona ndawo ikhupha iigesi zegreenhouse kwimbali ...
Zimbalwa iimpawu esinokuthi sizinike malunga noLeonardo DiCaprio okanye uM. Scorsese, kwelinye icala, UMark monroe (umbhali wesikrini) ngumbhali wamanye amaxwebhu aziwayo anje nge Cove.
Ke, ukuba awunayo enye into enomdla ukuyenza ngokuhlwanje, lixesha lokuba ezinye iipopcorn kunye nesoda, Hlala phantsi ukuze wazi kwisandla seengcali ezinkulu kunye nabazobi, yintoni eyona nto ingcolisayo, kwaye banjani abantu ngexesha ukusombulula yonke loo "monakalo" ebesiyibangela ukusukela oko kwaqalwa uguquko kwimizi-mveliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Phambi konogumbe, bonwabela mahala i-documentary ebaliswa nguLeonardo DiCaprio
Siyavuyisana nani nonke ngokwenza uxwebhu olubaluleke kangaka, ndinqwenela ukuba bekukho abalinganiswa eHonduras abanentliziyo efana nekaLeonardo, apha eTegucigalpa neentaba ezincinci ezizele yimithi ziyabatshabalalisa,
Igama lam ndinguFrancis, umntu ongenampembelelo kuyo nantoni na ... kodwa ngenkalipho kwaye uya kuyinyamekela loo ndawo iluhlaza abafuna ukusiba.